दूर्जेय चेतना: तपाईंको काम छैन? ब्लगिङ गर्नुस
Browse » Home » विचार » तपाईंको काम छैन? ब्लगिङ गर्नुस
10 comments to “तपाईंको काम छैन? ब्लगिङ गर्नुस”
एकदमै सहि कुरा !! ब्लग भनेको फुर्सदका मान्छेको नभई विचार राख्‍न सक्ने तार्किक व्यक्तिहरूको साझा मञ्च हो !! फुर्सदमा ब्लग लेख्‍ने भन्नु एकदमै गलत हो !!
मेरो लागि पनि ब्लग एउटा रमाइलो हब्बी भएको छ...यो एउटा अथाह सागर पनि रहेछ...जति धेरै ब्लग हेरे पनि थुपै रमाइला ब्लगहरु छुटदा रहेछन् ।
साहैं रमाईलो कुरा गर्नु भयो दूर्जेय जी। साचैं नै ब्लग एउटा मनको बिचार पोख्‌ने र अरु सामु आफ्नो बिचार आदान प्रदान गर्ने साझा चौतारी हो।।
केहि कुरालाई कसैले कसरी हेर्छन् त कसैले कसरी । ब्लगमा रुचि नै नभएपछि तपाईंको साथीलाई त्यस्तै लाग्यो होला नि ।
निकै घतलाग्यो है, मलाई चाँहि यहाँ को कुरा !
रमाईलो अनूभव !, मलाई लाग्छ बल्गीङमा लागेपछि प्राय: हामिसबैलाई यस्ता केहि रोचक अनुभव हुने गर्छन । तपाईलाई त तपाईको साथिले "ब्लग त काम नपाएका मान्छेले गर्ने कुरा हो।" मात्र भनेछन। मलाई एकदिन मेरो एकजना शिक्षित साथीले
"हैन बिहे गरीसकेको मान्छेले पनि के बल्ग बनाएको?"भन्दा म एकछिन अकमक्क परेको थीएँ। थाहा छैन उनले ब्लगलाई के भन्ठानेका छन :)
फुर्सदमा एकचोटी मेरो यो पोष्ट पनि हेर्नुहोला (विज्ञापन गरेको चाही हैन है फेरी:)
हा हा हा.......... कमेन्टहरु हेर्दै जाँदाखेरी अन्तिममा पुगेपछि हाँसो छुट्यो। कुरा सही हो सबैको। घत पर्यो अनि कता कता काउकुती लागेर आयो अनि हाँसेको नि। दुर्जेयजीकै कुरालाई पैचो लिन्छु है फेरी "के मुस्कान र सानो खित्का छोडेर हास्ने मौका हैन र ब्लग अनी ब्लगगिङ?" । साँची हाँस्ने हसाउने/रम्ने रमाउने मात्रै नभएर कहिलेकाही त पारो चढ्ने र चढाउने मौका पनि हो नि ब्लगिङ। अनि चढेको पारो उतार्ने मौका पनि हो ब्लगिङ। कि कसो हो कुन्नी?
विश्व-संस्कृतिको असल पक्ष हामी नेपालीको बुझाईमा कति ढिलो आईपुग्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो ब्लग भनेको अरु केहि काम नपाएकाको 'काम' हो भन्ने सोचाई। ब्लगले मूलाधारका संचार माध्यमसंग प्रतिस्पर्धा गर्न थालिसक्यो अन्त, हामीकहाँ भने अझै यस्तै छ। खैर केहि छैन, तपाईँ हामी लागिरह्यौं भने स्थिति फेरिन पनि सक्छ।
सबै साथीहरुका कुरामा सहमति जनाउन चाहन्छु। मलाई पनि ब्लग जगत अत्यन्त आत्मीय र जीवनको छुटाउन नसकिने भाग जस्तो लाग्छ।
म चाहीं भाग्यमानी भएको छू यो मामिलामा ... मैले ब्लग खोले देखि केटो के के न गर्ने भो भनेर धेरैले चासो दिएका छन ...
यो ब्लग जालोमा पाइला टेक्दै छु र सुन्दैछु अरुका कुरा, .... शुरुमा त मलाई ब्लगमा यसरी साथीभाईको नेट्वर्किंग जस्तो हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन। धेरैले थाहा नपाएर हो की केहो? मलाई चाही कसैले कही भन्न भ्याएका छैनन ।